Ndị mmadụ 9 merụrụ ahụ na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na nso ụlọ nkwari akụ na obodo Tunis
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ndị mmadụ 9 merụrụ ahụ na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na nso ụlọ nkwari akụ na obodo Tunis
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Otu nwanyị gbawara onwe ya na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na isi obodo Tunisia, na-akọ na-emerụ ndị uwe ojii asatọ ahụ. A hụrụ ndị mmadụ ka ha na-agba ọsọ maka ndụ ha ka ogbunigwe ahụ gbawara n'okporo ámá na-ekwo ekwo.
Mgbawa ahụ mere na ụzọ Habib Bourguiba, etiti etiti Tunisia, na nso Thelọ ihe nkiri nke Obodo.
Onye ama ama bụ Mohamed Ekbal bin Rajib kwuru na ya "nọ n'ihu ụlọ ihe nkiri ahụ wee nụ nnukwu mgbawa ma hụ ka ndị mmadụ na-agba ọsọ," A na-anụkwa ụgbọ ala na-agba ọsọ na ebe ahụ.
Ọtụtụ ndị uwe ojii na ndị uwe ojii anọrọla ebe ahụ, dịka vidiyo ebuputara na soshal midia na-egosi ndị isi na-enyocha ozu nwanyị ahụ ma na-anwa ịchịkwa igwe mmadụ ụjọ.
Ọnụ na-ekwuchitere Mịnịstrị nke ime obodo bụ Sufian al-Zaq ekwenyela na ndị uwe ojii asatọ na otu nwa amaala merụrụ ahụ na mgbawa ahụ, akwụkwọ akụkọ Arab Local Al Chourouk na-akọ. Ogbunigwe ahụ mere n'akụkụ ụgbọ ala ndị uwe ojii na n'akụkụ ụlọ nkwari akụ.
Milestone ọhụrụ nke ụgbọ elu India: Site na njem awa 12…
Lufthansa maliteghachiri ihe dị elu na North America na Asia ...
Chess kpakpando Georgian na -ebo Netflix ebubo maka ịkpọ ya ...
Oke mmiri ozuzo na-ebibi obodo nta, na-emerụ ọtụtụ narị mmadụ ...
Kedu ihe kpatara odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Polokashvili ji bụrụ ...
Thailand kpuru ìsì na COVID-19 Surge: Pushes Phuket Sandbox
Kedu ebe kachasị ndị njem nleta mara mma?
Na -agagharị na ihe nketa Seychelles
Achọrọ M Nwa: Ebumnuche Na njem!
Ịlanarị nnukwu nwamba Africa: Anụ ọhịa na njem ...
Ihe egwu dị na ekwentị, kọmpụta & teknụzụ ...
Ụgbọ elu San José na Reno-Tahoe na ụgbọ elu Southwest…